Famitranam-pihavanana sy famelan-keloka
"Fa isika koa dia adala fahiny… sady hala no nifankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin’Andriamanitra, Mpamonjy antsika, sy ny fitiavany ny olona, dia … araka ny famindrampo kosa no namonjeny antsika." Titosy 3:3-5
“Nanjary kristiana aho, kanefa nisy zavatra nanavesatra ny foko. Tsapako fa niteny tamiko Andriamanitra hoe: "Mandehana mihavana amin’ny rafozan-dahinao". Efa hatry ny ela no ratsy ny fifandraisanay. Na teo aza ny tahotro, dia tapa-kevitra aho hitsidika azy. Nangatsiaka ny fandraisany ahy. Nefa roso ihany aho nanao fanazavana lavabe, ary nony farany, dia hoy aho taminy: "An’ny lasa izany rehetra izany, fa ankehitriny kosa aho efa manana an’i Jesosy ho Tompoko. Namela ny heloko Izy. Ianao koa, miangavy anao aho, mamelà ny heloko…" Rehefa afaka kelikely, dia namihina ahy izy.
Nanomboka tamin’io andro io dia tena nifandray am-po izahay, ary nandresy ny fankahalana ny fitiavana.” (Festo Kivengere)
Tompo ô, hitanao ireo fanoherako,
Avia hanaisotra ny eboeboko,
Handroaka lavitra ny avonavoko.
Avia hanova ny foko tena mafy
Sy ny fihevitro manjavozavo.
Ambarako Aminao ireo zava-dratsy nolazaiko,
Avia hamboatra ny fifandraisako aman’olona,
Aoka hangina ireo fanontaniako rehetra.
Tsy te hitahiry lolompo intsony aho,
Tompo ô, soloy ny faka mangidy ato anatiko
Ary ovay ny fihetsiko.
Atsangano re aho, noho ny fahasoavanao.
Misaotra, ry Tompo, namela heloka.
Araka ny tononkiran’i Sylvain Frémond